မော်တော်ကားကို ဘယ်မှာရပ်လို့ရပြီး စခန်းချရမလဲဆိုတာ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 20/04/2022 09:00 | အကြံပေးချက်များ, ဆွေမျိုး
ခရီးသည်ခန်းပါသော မော်တော်ကားတစ်စီးကို ဝယ်ယူသူများတွင် မေးခွန်းမေးရန်မှာ အလွန်အဖြစ်များပါသည်။ ကားအိမ်ဘယ်မှာရပ်လို့ရမလဲ။. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တစ်ခုစီပေါ်တွင်မူတည်ပြီး အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင် မကြာခဏရှင်းလင်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း မော်တော်အိမ်များသည် ကြီးမားသော တွန်းအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ခရီးသွားဖို့ ၀ယ်ဖို့ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်။ အားလုံးပေါ်လွင်တယ်။ လွတ်လပ်ရေး သူတို့လိုချင်တဲ့ သင်တန်းကို တက်နိုင်ပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ နေရာကို ရပ်တန့်နိုင်တဲ့အတွက် အဲဒါက သူတို့ကို ပေးတယ်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ဆန္ဒအတိုင်း ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်နိုင်စေကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤယာဉ်များထဲမှ တစ်စီးကို ဝယ်ယူရန် စဉ်းစားနေပါက၊ သင့်အိမ်တွင် ကားရပ်နိုင်သည့် နေရာနှင့် ၎င်းတွင် သင့်အား ပေးဆောင်နိုင်သော အားသာချက်များကို ရှင်းပြပါမည်။
1 ဘယ်မှာ စခန်းချပြီး မော်တော်ကားကို ဘယ်မှာရပ်လို့ရမလဲ။
1.1 ကမ်းရိုးတန်းနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ
2 မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
3 မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်း၏ အားနည်းချက်များ
ဘယ်မှာ စခန်းချပြီး မော်တော်ကားကို ဘယ်မှာရပ်လို့ရမလဲ။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်ဆုံး ရှင်းပြရမှာက ကားပါကင်နှင့် စခန်းချခြင်းကြား ကွာခြားချက်. ဤနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အလားတူသော်လည်း ထပ်တူမကျ၊ ညအိပ်ပါ။. အများအားဖြင့် စည်းကမ်းအတိုင်း၊ ကားပါကင်ဖွင့်ထားသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သင်၏မော်တော်အိမ်အား ရပ်နားနိုင်သည်။ အတိအလင်းတားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ၎င်းသည် ယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ခြင်းအား ရပ်တန့်မည်မဟုတ်သောကြောင့် အခြားသူများနှင့် တူညီသောအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များရှိသည်။
မော်တော်အိမ် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိသည်မှာ အမှန်ပင်။ သင်သည် သေးငယ်သော Camper အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ထရပ်ကားအသေးစားနှင့် ပိုကြီးသော အမျိုးအစားကို ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်၊ သင်သည်အခြားလေးလံသောယာဉ်များကဲ့သို့ကန့်သတ်ချက်များရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြို့လယ်တွင် လှည့်လည်သွားလာခွင့်မပြုသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏လမ်းများပေါ်တွင် ရပ်နားခွင့်မပြုသော မြို့များရှိသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မင်းရဲ့မော်တော်အိမ်နဲ့လည်း လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော်၊ camper အမျိုးအစား သို့မဟုတ် သေးငယ်သော အမျိုးအစားသို့ ပြန်သွားပါက ၎င်းတို့ကို ကားများကဲ့သို့ တူညီသောနေရာများတွင် ရပ်ထားရုံသာမက၊ သင်သူတို့၌တစ်ညတာအိပ်နိုင်သည်။. သို့သော် အချို့သော စည်းကမ်းများကို လေးစားရမည်။ ၎င်းတို့တွင် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများ မြင်ကွင်း သို့မဟုတ် အခြားယာဉ်များ၏ လည်ပတ်မှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် ဆူညံသံများကို ရှောင်ရှားခြင်း ပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤနေရာများတွင် စခန်းချခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
၎င်း၏အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း တစ်ညလုံး သင့်အိမ်တွင် အိပ်ခြင်း၏အချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာရပ်ထားသရွေ့ သင်လုပ်နိုင်သည် ။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် စားသောက်ခွင့်နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်ယာဉ်သည် ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မည်သူမှ မပြောနိုင်ပါ။
သို့သျောလညျး စခန်းချလို့မရဘူး. ဤသည်မှာ သင့်အိမ်တွင် ကားပါကင်နှင့် ကာဗာများ သို့မဟုတ် အခြားသော အပြင်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း၏ အဖြစ်မှန်ဟု နားလည်သည်။ ပြင်ပသို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ စခန်းသွင်းရုံသာ တတ်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေကို ဖွင့်ပေးထားတယ်။. ယုတ္တိနည်းအားဖြင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်များသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရထားသရွေ့ စခန်းချခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။
သင်၏မော်တာအိမ်အား ကမ်းရိုးတန်းတွင် သို့မဟုတ် အထူးကာကွယ်ထားသည့်နေရာများတွင် ကားပါကင်လုပ်သည့်အခါ အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ ပထမအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိပြုပါ။ ကမ်းခြေဥပဒေ ကမ်းခြေများနှင့် ၎င်းတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုနယ်မြေများတွင် ကားပါကင်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ အမှိုက်တစ်မျိုးမျိုး လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒဏ်ငွေနှစ်ရပ်စလုံးမှာ အလွန်များတယ်။ တားမြစ်ထားသောဆိုဒ်များ၏ နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Doñanaအမျိုးသားဥယျာဉ်.
သို့သော်လည်း အကာအကွယ် သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းဒေသအားလုံးနီးပါးတွင် ရှိနေသည်။ စခန်းချသည့်နေရာများ သင့်အိမ်နှင့်လည်း လုပ်နိုင်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုများ ဝန်ဆောင်မှုနယ်မြေများသင့်ကားမှ အမှိုက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်စေမည့် အိမ်သာများ၊ ကော်ဖီဆိုင်နှင့် အခြားသော သာယာအဆင်ပြေမှုများလည်း ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အခမဲ့ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေနိုင်သည်။
အတိအကျ၊ သူတို့က ပေးဆောင်တယ်။ စခန်း၊ မော်တော်အိမ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလေ့ရှိသော နေရာများ။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား သက်တောင့်သက်သာနေထိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို ပေးဆောင်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် စျေးမကြီးပါ။
မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
ငါတို့ပြောပြီးသားအတိုင်း၊ ဒီကားအမျိုးအစားက ပေးစွမ်းတဲ့ အားသာချက်က လွတ်လပ်ရေး. သင်သည် ပန်းတိုင်မရှိသောလမ်းကို ဖြတ်နိုင်သည်၊ သင်၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲကာ သင်အလိုရှိရာတိုင်းတွင် ညအိပ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဟိုတယ် သို့မဟုတ် တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် တည်းခိုပါက၊ သင်သည် မြို့တစ်မြို့၌ သာယာသော အားလပ်ရက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မော်တော်တာအိမ်တစ်ခုဖြင့် သင်သည် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ လုံးလုံးလျားလျား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး နိုင်ငံပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ သင်ပြုလုပ်လိုသော ကီလိုမီတာအပေါ်မူတည်ပါသည်။
ကမ်းခြေနှင့် တောင်တန်းများ၊ အထိမ်းအမှတ်နေရာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် သင့်ခရီးစဉ်တွင် အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုပင် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ မင်းနေစရာရှိတယ်ဆိုတာ အမြဲသိနေရမယ်။ ထို့အပြင်၊ ဤလွတ်လပ်မှုကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ခရီးသွားပါ။သင်အလိုရှိသောနေရာများတွင် အချိန်အနည်းအများ ရပ်တန့်လျက်၊ လမ်းကြောင်းသစ်များကို ကြံဖန်ဖန်တည်းပါ။.
မော်တော်အိမ်တွေရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ မင်းလိုအပ်တာအကုန်ရှိတယ်။ သေးငယ်သောနေရာတစ်ခုတွင်၊ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဟိုတယ်အခန်းနှင့်မတူဘဲ သင့်ကားတွင် မီးဖိုချောင်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်း၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ဧည့်ခန်းငယ် သို့မဟုတ် သင်ရွေးချယ်ထားသော မွေ့ယာပါသော ကုတင်ကဲ့သို့သော အခြားသာယာအဆင်ပြေမှုများ၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မိသားစုလိုက် မော်တော်အိမ်ဖြင့် ခရီးသွားခြင်းသည် အထူးသဖြင့် သင့်ကလေးငယ်များအတွက် အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက်၊ အားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ စွန့်စားမှုတစ်ခု ဘီးများဖြင့် အသွင်ပြောင်းနိုင်သော အိမ်သေးသေးလေးတွင် နေရတာ။ ထိုအရာအားလုံးထက်၊ သူတို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားကြလိမ့်မည်။ သဘာဝနှင့်အဆက်အသွယ် ဤခရီးစဉ်အမျိုးအစားက သူတို့ကို ပေးဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည် အပြည့်ထလာသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ Picos က de ယူရိုပါလိဂ်.
မော်တော်အိမ်လို့တောင် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု. ပထမတော့၊ ဒါဟာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ငွေကြေးအသုံးစရိတ်ကို ဆိုလိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်လုပ်နိုင်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေအားလုံးကို အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ တည်းခိုမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ ရေရှည်တွင် သင်သည် ငွေပမာဏများစွာကို ချွေတာနိုင်လိမ့်မည်မှာ သေချာပါသည်။
သငျသညျ၏ထို option ကိုလည်းပြီ မော်တော်အိမ် ငှားပါ။. ဤကိစ္စတွင်၊ ခြားနားချက်သည် ပို၍ပင်အရေးကြီးသည်။ ယုတ္တိဗေဒအရ၊ တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းရှိပြီး ၎င်းသည် သင်နေထိုင်ရာဒေသနှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ သို့သော် ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ ထိုယာဉ်များထဲမှ တစ်စီးသည် တစ်နေ့လျှင် ယူရိုတစ်ရာ သို့မဟုတ် တစ်ရာ့ငါးဆယ် ကုန်ကျနိုင်သည်။ ဤအချက်ဖြင့် သင်သည် သင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် တိုက်ခန်းငယ်လေးတစ်ခန်းကို ငှားရမ်းနေပြီး သင့်ခရီးစဉ်အတွက် သွားလာရန် ကားတစ်စီးလည်း ရှိသည်ဟု ယူဆပါ။ ယခု ဤစျေးနှုန်းနှင့် သင်သွားရောက်လည်ပတ်လိုသော မြို့များသို့ ခရီးစရိတ်နှင့် ၎င်းတို့နေထိုင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ငွေကွာဟချက်က သိသိသာသာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မော်တော်အိမ်မှာ ခရီးသွားခြင်းက သင့်အားလပ်ချိန်မှာ သင့်ခရီးစဉ်ရဲ့နေရာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေတယ်။ မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့် ကြိတ်ကြိတ်တိုး မဖြစ်ရသည့် နေ့စွဲများ. ၎င်းနှင့်အတူ ပြတိုက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများတွင် ရှည်လျားသောတန်းစီခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။
သို့သော် မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားရာတွင် အားနည်းချက်အချို့ရှိသည်။ အရေးကြီးဆုံးတွေကို အောက်မှာ ပြပေးပါမယ်။
မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်း၏ အားနည်းချက်များ
အခြားခရီးစဉ်အမျိုးအစားများကဲ့သို့ပင်၊ မော်တော်အိမ်တွင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် မသာယာပါ။ စမ်းသုံးဖူးတဲ့လူတချို့က မတူညီတဲ့ အားလပ်ရက်ကို မလိုချင်ကြဘူးဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ သို့သော် အခြားသူများ ဤခရီးလမ်းကို လိုက်လျောညီထွေ မနေနိုင်သည်မှာ မှန်ပါသည်။
အကောင့်ထဲသို့သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီကားအမျိုးအစားတွေက မင်းကိုပေးတဲ့အလုပ်. တစ်ခါတစ်ရံတွင် စခန်းချသည့်နေရာ၌ တည်ငြိမ်နေစေရန် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ရသည်။ အလားတူ၊ သင်သည် ၎င်းအား လျှပ်စစ်ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမည်။ မိလ္လာကိုတောင် ဖယ်ရမယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်အား ပေးဆောင်သည့် နေရာသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။. ထို့ကြောင့် သင်နှင့်အတူလိုက်ပါမည့်သူများနှင့် အလွန်စည်းစနစ်ကျပြီး လေးစားမှုရှိရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခေါက်ကုတင်တစ်ခုသည် စားပွဲတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါက၊ အခြားသူများ နံနက်စာစားနိုင်ရန် စောစောထရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သမားရိုးကျ ခရီးစဉ်နဲ့ မတူတာက ကားအိမ်နဲ့ သွားရမယ်။ အားလုံးလုပ်ပါ။. ကားမောင်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး၊ စျေးဝယ်ခြင်းတို့ကို ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယေဘူယျအားဖြင့် သင်သည် သာယာသောနေထိုင်မှုဖြစ်ရန် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အခါသမယများစွာတွင်၊ အလယ်တန်းကားတစ်စီး လိုအပ်ပါမည်။. မော်တော်အိမ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာများသည် အများအားဖြင့် မြို့၏ဆင်ခြေဖုံးများတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် သင်သည် သင်၏စခန်းချရာနေရာအား ဖြိုဖျက်ပြီး ၎င်းကို ပြန်လည်တပ်ဆင်မည် သို့မဟုတ် သွားလာရန် ဆိုင်ကယ် သို့မဟုတ် စက်ဘီးကို အသုံးပြုပါ။ တစ်ဖက်ကလည်း ဒီကားအမျိုးအစားတွေက နှေးတယ်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မရောက်နိုင်တဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး ခရီးထွက်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မော်တာအိမ်မှာ သူ့မှာရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုရပါမယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်. ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် ချိုသာခြင်းမရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာလည်း အတော်လေးစျေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် ကားတစ်စီးထက် လောင်စာဆီ သိသိသာသာ ပိုစားသုံးပြီး ၎င်းအပြင် ၎င်း၏ အာမခံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲငင်သည့် ယာဉ်များအတွက် ၎င်း၏ အခွန်အခ၊ ၎င်း၏ စစ်ဆေးမှုများနှင့် ၎င်း၏ ပျက်စီးမှုများကို သင် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တောင်မှ သူ့ကို ကားဂိုဒေါင်ရှာပါ။ ခရီးမသွားဘဲနေပါ။
ပြီးတော့ ဒါက မော်တော်အိမ် ကားရပ်နိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းကို ထပ်ပြောဖို့ စေတယ်။ အများသူငှာ လမ်းများပေါ်တွင် ရက်အနည်းငယ်ထက်ပို၍ တစ်နေရာတည်းတွင် ယာဉ်မရပ်ရကြောင်းကိုလည်း သိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ၎င်းကို အခါအားလျော်စွာ ရွှေ့သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကားရပ်ခြံ ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူသူမအတွက်သီးသန့်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ရှင်းပြပါတယ်။ ကားအိမ်ဘယ်မှာရပ်လို့ရမလဲ။. ထိုသို့လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် စခန်းချခြင်းနှင့် ကားပါကင်ကို ခွဲခြားသိမြင်ရပါမည်။ ကျန်သောယာဉ်များကဲ့သို့ပင် နောက်ပိုင်းတွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း စခန်းချခြင်းကို ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာများတွင်သာ ခွင့်ပြုထားသည်။ စခန်း. မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား motorhome ကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်၊ ၎င်းကို သင်နှစ်သက်လာရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ဆွေမျိုး » မော်တော်အိမ်ဘယ်မှာရပ်လို့ရမလဲ။
Costa Brava ၏ Nudist ကမ်းခြေများ